पुरुष जसले महिलालाई माया गर्दैनन्, लार्सनको मरणोत्तर सफलता | वर्तमान साहित्य
पुरुष जसले महिलालाई माया गर्नुहुन्न
पुरुष जसले महिलालाई माया गर्नुहुन्न स्टिग लार्सनले लिखित अपराध उपन्यास हो। यो २०० 2005 मा प्रकाशित भयो, लेखकको मृत्यु भएको एक वर्ष पछि, र यो श्रृंखलाको पहिलो पुस्तक हो मिलेनियम। यसको सुरूवात सफल भयो, किनकि यसले छोटो समयमा लाखौं प्रतिलिपिहरू बेच्यो।
कथा प्रस्तुत गर्दछ मिकाएल ब्लोमकविस्ट (पत्रकार) yaलिस्बेट सलान्डर (ह्याकर), को एक महत्वपूर्ण स्वीडेनको परिवारको सम्बन्धमा एक मुद्दाको समाधान गर्न सँगै आउनेछ। यो पहिलो साहसिक दुई पटक सिनेमा अनुकूलित गरिएको थियो; पहिलो, २०० in मा स्वीडेनमा एक उत्पादन कम्पनी मार्फत। त्यसपछि, २०११ मा, अमेरिकी संस्करण जारी भयो, जहाँ अभिनेता डेनियल क्रेग र अभिनेत्री रुनी माराले अग्रणी जोडी गठन गरे।
1 पुरुष जसले महिलालाई माया गर्नुहुन्न
1.1.1 गायब हुनु
1.1.3 स्टार जोडी
2.1 काम सकियो
2.3 मरणोत्तर प्रकाशन
पुरुष जसले महिलालाई माया गर्नुहुन्न यो एक छ कालो उपन्यास त्यो त्रयी शुरू हुन्छ मिलेनियम. इतिहास २००२ मा स्वीडेन मा लिन्छ, र यसको विषयवस्तु युवा Harriet Vanger - १ 16 वर्ष पुरानो बेपत्ताको वरिपरि घुम्छ, जुन झन्डै चार दशक पहिले भएको थियो। एक पटक किशोर-किशोरीलाई के भयो भनेर पत्ता लगाउन, भ्यान्जर्सले अनुसन्धानकर्ता र कम्प्युटर ह्याकर लिस्बेट सलान्डर र पत्रकार मिकाएल ब्लोमकविस्टलाई सम्पर्क गरे।
मिकाएल ब्लोमकविस्ट एक पत्रकार हुन् र स्विडेनी राजनीतिक पत्रिकाको सम्पादक मिलेनियम. कथानकले उसलाई खराब समयमा गुज्रिरहेको छ उद्योगपति हान्स-एरिक Wennerström विरुद्ध मानहानि मुद्दा गुमाए पछि। ब्लोमक्विस्टले औल्याए कि व्यापारी भ्रष्टाचारी थिए तर अदालतले उनीहरुलाई प्रमाणित गरेन कि उनले अपराधी रहेछ र पत्रकारलाई तीन महिना जेलमा जेल हाले र महँगो जरिवाना तिर्न लगाए।
पछि, हेनरिक भान्जर Van भान्जर कर्पोरेसनका फोरमर निर्देशक लिस्बेट सलान्डरलाई सम्पर्क गर्नुहोस् Blomkvist अनुसन्धान गर्न। रिपोर्ट वितरित भएपछि, भान्जर पत्रकारलाई अनुसन्धानमा राख्ने निर्णय गर्दछ बारेमा उनको भान्जी भान्जी Harriet को बेपत्ता, 36 XNUMX बर्ष पहिले भएको थियो। विनिमयमा, उनले Wennertröm विरुद्ध कडा प्रमाण प्रस्तुत गर्दछ; इनाम को बारे मा सहमत, Blomkvist स्वीकार गर्दछ।
पत्रकार हेडेबी टापुको यात्रा गर्दछ, भेन्जरले बसोबास गर्ने स्थान र जहाँ Harriet हराएको थियो। त्यहाँ उसले मार्टिनलाई भेट्छ - हराएको केटीको भाइ - र परिवारका अन्य सदस्यहरू, साथै कम्पनीका केही सहयोगीहरू।
अनुसन्धानको बीचमा, ब्लोमकविस्टसँग सालंदरको समर्थन छ, जो तपाइँ पज्जलका टुक्राहरू सँगै राख्दछ जब सम्म तपाइँ आश्चर्यजनक परिणाममा पुग्न मद्दत गर्दछ।
वर्षमा 1966 भेन्जरहरू पारिवारिक फार्ममा भेला भएका थिए हेडेबी टापुमा। सद्भाव र रमाइलोको सामान्य क्षण के हो अचानक को पछि उत्तेजित चीजमा परिणत भयो Harriet बेपत्ता.
परिस्थिति एकदम अनौंठो थियो, पुलिस टोलीहरूले कुनै प्रकारको ट्रेस नपाई अथक खोजी गरे। समयको क्रमसँगै, केस बन्द थियो, कुनै प्रमाण छैन उनको मृत्यु पुष्टि गर्न, अपहरण वा अप्रत्याशित भाग्न।
टापुमा पुग्दा, मिकाएल ब्लोमकविस्टले ह्यारिएटका आफन्तहरूको धेरैसँग अन्तर्वार्ता लिएको छ, उसकी आमा र भाई सहित - जो कम्पनी को नयाँ निर्देशक हो। तपाईको अनुसन्धान भित्र ध्यान नलिएको सुराग खोज्नुहोस्: दुई फोटोग्राफहरू हाई स्कूल मा युवती को y उनको डायरी। पछिल्लोले पाँच नाम र नम्बरहरू समावेश गर्‍यो जुन रहस्य हो।
पर्निला (ब्लूमकविस्टकी छोरी) टापु हुँदै छिन् र ईन्ग्मा समाधान गर्न मद्दत गर्दछ। उक्त खोजले पत्रकारलाई एक सेक्रेटरीको हत्यामा पुर्‍यायो १ 1949 XNUMX in मा भएको भान्जर कम्पनीको जो एक सिरियल हत्यारा हो कि अन्तर्दृष्टि। तुरुन्तै, व्यापारीले मिकाएलसँग डबल गर्न लिस्बेट सलान्डर पठाउने निर्णय गर्दछ र यसैले मुद्दा छिटो छिटो पुर्‍याउँछ।
एक पटक लिस्बेटले ब्लोमकविस्टको अनुसन्धानमा सामेल भएपछि तिनीहरूले समाधान गर्न समाप्त गरे रहस्य Harriet डायरी मा डुबायो। त्यो जानकारी उनीहरूलाई हराइरहेका महिलाहरुको केस पत्ता लगाउन नेतृत्व दिए; संख्याले बाइबलको पदहरूलाई संकेत गर्‍यो जहाँ कडा ईश्वरीय सजायहरू वर्णन गरिएको थियो। यसले पत्रकार सिद्धान्तलाई पुष्टि गर्दछ: यो एक सिरियल किलर हो.
पछि तिनीहरूले एउटा डरलाग्दो अवस्था पत्ता लगाए: मार्टिन Arहरिएटको भाई— धेरै महिलालाई बलात्कार र मार्न जिम्मेवार छ। उसको सामना गरेर उनले यी जघन्य अपराधहरूको पुष्टि गर्दछ र आफ्नो बुबा, जेफ्री भेन्जरबाट उनले सबै कुरा सिकेका कुरा स्वीकार गर्दछन्। ती सबै अमानवीय कार्यहरूको घोषणा गरिसके पछि पनि मार्टिनले आफ्नी बहिनीलाई के भयो भनेर केही थाहा नभएको दाबी गर्छिन्।
जेफ्री भान्जर The परिवार को टाउको— बाहिर बने भौतिक लेखक घटनाहरु को जसलाई डायरीमा पहेलियो; थप रूपमा, अर्को डरलाग्दो अपराध उजागर गरियो: उसले बारम्बार अवसरहरूमा आफ्ना दुई बच्चाहरूलाई यौन दुर्व्यवहार गर्‍यो।
मार्टिन, पत्ता लागेपछि, कुना लिस्बेट र मिकाएल तिनीहरूलाई मार्न, तर तिनीहरु तिनीहरूले हासिल गर्छन् भाग्नु। त्यहाँबाट तिनीहरूले थोप्लाहरू जडान गर्न थाल्छन् र एक अविश्वसनीय खोज गरियो कि केसलाई सुल्झाउने अनुमति मिल्छ, ह्यारियटको ठाँउ फेला पार्दै।
कार्ल स्टिग-एरल्याण्ड लार्सन एक थियो स्विडेनी लेखक र पत्रकार अगस्त १ August मा जन्म सन् 1954 को शहर मा स्केलेफ्तेå। उनका अभिभावक - भिभियान बोस्ट्रम र एरल्याण्ड लार्सन - उनीहरू सानै छँदा निराश भएका थिए जब उनीहरू उनलाई गर्भधारण गर्थे; यसको कारणले, स्टिग उहाँसँगै हजुरबा हजुरआमाले हुर्काउनुभयो।
जब उहाँ9बर्षको हुनुहुन्थ्यो, हजुरबा हजुरआमाको मृत्यु भयो, उनलाई आफ्ना आमाबुबाको साथ उमेå फर्कन प्रेरित गर्नुभयो। तीन वर्ष पछि, टाइपराइटर प्राप्त गर्नुभयो र हरेक रात लेख्नको लागि आफूलाई समर्पित गर्नुभयोधेरै युवा अवस्थादेखि नै उनी अनिद्राबाट ग्रसित थिए। उनका नातेदारहरू उपकरणको आवाजले प्रभावित भए र उसलाई बेसमेंटमा पठाए; यस असहज स्थितिले स्टिगलाई स्वतन्त्र हुने निर्णय गर्यो।
विश्वविद्यालय डिग्री नभए पनि, स्टिगले लगातार २२ बर्षसम्म ग्राफिक डिजाइनरको रूपमा काम गरे समाचार सम्बद्ध Tidningarnas Telegrambyrå (TT) मा। पनि उहाँ एक राजनीतिक कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो र भियतनाम युद्धको बिरूद्ध धेरै प्रदर्शनको नेतृत्व गर्नुभयो, जातिवाद र चरम अधिकार। यसका लागि धन्यबाद, उसले ईभा गब्रिएलसनलाई भेटे, जो 30० बर्ष भन्दा बढी समयदेखि उनका साथी थिए।
र 1995, यसका रचनाकारहरूको अंश थियो एक्सपो फाउन्डेशन, भेदभाव र समुदाय को विरोधी-लोकतान्त्रिक दिशानिर्देशहरु को छानबिन गर्न र दस्तावेज को लागी स्थापित। चार बर्ष पछि पत्रिका निर्देशित एक्सपोत्यहाँ उनले पत्रकारको रूपमा कडा परिश्रम गरे। पत्रिका कार्यान्वयन गर्न उनको स struggle्घर्षको बावजुद, आवश्यक समर्थन प्राप्त नभएको कारण यो अन्तमा बन्द भयो।
उनले पत्रकारिता अनुसन्धानमा आधारित धेरै पुस्तकहरू उत्पादन गरे स्विडेनी मुलुकमा नाजीहरूको उपस्थिति र वर्तमान सरकारसँगको सम्बन्धमा। यसको कारण र उनीहरूको प्रदर्शनमा उनीहरूको सक्रिय उपस्थिति, धेरै अवसरहरूमा मार्ने धम्की दिइयो। यो एक मुख्य कारण यो थियो कि उसले ईवासँग विवाह गर्न अस्वीकार गर्‍यो, उनको निष्ठाको रक्षा गर्न।
स्टिग लार्सन Stock नोभेम्बर २००9को हर्ट अट्याकको कारण स्टॉकहोममा निधन भयो। यो स्वीडेनका लेखक एक चेन धूम्रपान गर्ने, रातको उल्लू र जंक फूड प्रेमी थियो भन्ने तथ्यबाट प्रेरित भएको हो भन्ने अनुमान गरिएको छ।
आफ्नो अप्रत्याशित मृत्यु हुनुभन्दा केही दिन अघि, लेखकले त्रयीको तेस्रो भाग पूरा गरिसकेका थिए मिलेनियम. त्यतिखेर यसका सम्पादकले कल गरिएको पहिलो भोल्युममा काम गर्दै थिए पुरुष जसले महिलालाई माया गर्नुहुन्न। यो पुस्तक उनको मृत्युको एक बर्ष पछि प्रकाशित भयो र एक सफल सफलता भयो। प्रकाशक आश्वासन दिन्छन् कि यो गाथाले 75 XNUMX मिलियन भन्दा बढी प्रतिहरू बिक्रि गर्‍यो।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कालो उपन्यास » पुरुष जसले महिलालाई माया गर्नुहुन्न